I-motorola iqala ukuvavanya uvavanyo lwe-moto x olusulungekileyo lwe-android 6.0 uhlaziyo lwe-marshmallow
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo IMotorola iqala ukuvavanya uvavanyo lweMoto X yoVavanyo oluSulungekileyo lwe-Android 6.0 uhlaziyo lweMarshmallow
IMotorola iqala ukuvavanya uvavanyo lweMoto X yoVavanyo oluSulungekileyo lwe-Android 6.0 uhlaziyo lweMarshmallow
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, uDavid Schuster, uMotorola kunye neeapos s UMlawuli oMkhulu woLawulo lweMveliso yeSoftware, wabhengeza ukuba Uhlaziyo lwe-Android 6.0 Marshmallow lweMoto Moto X yoHlelo oluSulungekileyo isendleleni. Namhlanje, u-Schuster ubhengeze ukuba i-Motorola iqale uvavanyo lwe-soak lohlaziyo.
Kwinyanga ephelileyo, iingxelo ziveze ukuba ezinye iiyunithi zeMoto Motorola X eziSebenzayo zaqala ukufumana uhlaziyo lwazo lweMarshmallow. Kuqala, bekukholelwa ukuba iMotorola ikhupha uvavanyo lokuntywila, kodwa u-Motorola uSphuster wayiphikisa le mbono, esithi ibiyi uvavanyo olulula lokuqhuba . Ngeli xesha, nangona kunjalo, uvavanyo lwenyani lokwenyani sele luqalile.
Ukuba yonke into ihamba ngokwesicwangciso seMotorola & apos, ukumiliselwa okupheleleyo kuya kulandela kungekudala. Kwithiyori, oku kuya kuthetha ukuba uMlilo X uHlelo oluSulungekileyo luya kuqala ukufumana uhlaziyo lwalo lwe-Android 6.0 Marshmallow kwiveki nje ezimbalwa.
Njengokuba abaninzi besazi kakade, i-Motorola Moto X yoHlelo oluSulungekileyo ayisiyonto yimbi kunohlobo lwaseMelika lwesimbo seMoto X. Umahluko okhoyo phakathi kwefowuni sele uqalile ukuyifumana Uhlaziyo lwe-Android 6.0 Marshmallow kwezinye iimbombo zehlabathi .
Xa kuthelekiswa ne-Android 5.1 Lollipop, eyinguqulelo ye-Android esetyenziswa ngoku yiMoto Moto X, uHlelo lwe-6.0 lweMarshmallow lukaGoogle kunye neeapos zeSelfowuni eza neziphuculiweyo ezinje ngeGoogle Ngoku kwiTephu, imodeli yemvume eyimbumbulu, iphuculwe ulawulo lwevolumu, kunye nogcino lwebhetri efanelekileyo ebizwa ngokuba yiDoze. Ngolwazi oluthe kratya kwinguqulelo entsha ye-OS, jonga eyethu Uvavanyo lwe-Android 6.0 Marshmallow .
I-Motorola Moto X Uphengululo olusulungekileyo
umthombo: UDavid schuster nge I-GSMArena
Iselfowuni kwi-onetouch pop 7 uphononongo
Eyona nto ibhetri ye-galaxy s7
Elona nqaku liphezulu lama-20 elikhuselayo
I-Linux ls Command-Uluhlu lweefayile
UGoogle usungula i-Art Selfie-tshatisa i-selfie yakho nemisebenzi edumileyo yobugcisa
I-Apple Watch Series 4 ubomi bebhetri: Ngaba iya kuhlala ngaphezulu kosuku?
Uyifumana njani i-iPhone yokubuyiselwa kwemali kwi-Apple
Uyigcina njani i-snapchats ngendlela elula nefanelekileyo
IOS 9.3 & apos; s Night Shift, iphononongwe: yintoni, uyenza njani kwaye uyilawule
Iapile kunye neapos s iPhone 11 Pro yehla yaya kuthi ga kwi-0 yeedola kwisivumelwano esitsha esimangalisayo esingafunanga kuthengiselana
I-iPad Pro 2021 (M1) vs MacBook (M1): yintoni umahluko?
Ungayinqanda njani kwaye ucofe imiyalezo ebhaliweyo yogaxekile kwi-Samsung Galaxy S6 kunye ne-Galaxy S6
Izandla ze-Samsung Gear Fit 2 Pro: umkhondo wokuqina komzimba wokusebenza kakhulu